Runyorero rwekupedzisira rekuki Art sens - mazano eimba nebindu
Runyorero rwekupedzisira rekuki
03.10.2014 Yakatumirwa na: Art Sense
Kukurumidza, nyore, kunonaka!, Mahwendefa, Pfungwa Pamba, Recipes
Iyi yekubheka yakakanganikwa yemabhisiketi, bhotela uye marmalade. Pane imwe nguva pakange pasina mhando dzemabichi, yaive imwe yeanonaka kwazvo enzimbe.
1 Chiedza Round Biscuit Pack (150)
50y akanyoroveswa mafuta
50y shuga yakasvinwa
1 chirongo chidiki che marmalade
(iwe uchazoda nezve 150).
Unonamatira cookies emarbleade uye bvumira iyo 10 maminetsi kuti abike zvakanaka. Rova bhotoro rakapfava pamwe nefurawa yeshuga kusvikira fluffy. Isa rwonzi rwakatsetseka pane cookie kana kuputira epurasitiki uye shandisa iyo oiri kirimu urefu hwese hwe roll. Putira mune foil uye nzvimbo mufiriji kweinenge awa kuita. Cheka iyo yekutanga slant, pakona peanenge 45 madhigirii, kuti abudise zvidimbu zvechiedza uye mitsetse yerima.
biscuit roll, mabhisikiti, marmalade cookies, mabhisikiti ane bhotela uye marmalade, dhiziri, marmalade, bhata rinotapira, roll, biscuit roll, marmalade roll, cookies ane makuki, inotapira ne marmalade, inotapira nebhotoro, inotapira nebhotoro uye marmalade, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Pfungwa ina dzechokoreti ndiro
Heano mazano mana ekushamisa vashanyi neessess yakashumirwa mundiro yemo chocolate ...
Easy uye inonaka muchero kirimu parfait
Classic parfait ndeye jelly kirimu iyo inoshandiswa mukubika senzira inomira ...
Cherries ndeimwe yezvinonyanya kuyedza zhizha-zhizha rinotapira zvipo zvechisikigo. Ivo vanoshandisa ...
Chocolate mosaic nemakuki - iri nyore, nekukurumidza uye inonaka sessert
Iyi inonaka chokoreti dessert inoratidzira kuti yakawanda sei yezviwanikwa zveputano zvisina kubatana ...
Zvinonhuwira zvinogadzirwa kumba
Baklava ndiyo yetsika yechiArabic dessert iyo yakapararira muEuro-Asia ...
"Mhete yaMambo" (inoitwa "Roscón de reyes" kana "rosca de reye ...